China ịkwanyere ntekwasa ígwè waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Cokwanyere ntekwasa ígwè waya udọ bụ ugbu a kasị ọtụtụ ebe ada ụdị nke plastic ntekwasa ígwè waya eriri. Ndị ahịa na-akwado ya maka ọnụahịa ya dị ala na mma ya.
A na-ejikarị eriri waya ígwè PVC eme ihe maka ọnụ ala ya na mma ya.
Aha PVC zuru oke bụ POLYVINYL CHLORIDE, nke nwere ezigbo ndọtị; na usoro nke mgbanwe, abrasion eguzogide, elu na ala okpomọkụ na-eguzogide, ya arụmọrụ bụ ubé njọ karịa Pu, ma price bụ nnọọ ala karịa PU. ma ọ bụrụ na onye ahịa enweghị nnukwu ihe achọrọ maka nkwụsị abrasion na ịdị nro, nwere ike ịhọrọ ụdị PVC.
Ihe mkpuchi plastik chọrọ ezigbo ihe eji arụ ọrụ ma na-eyi nguzogide. Ọ na-eji igwe mkpuchi plastik eji nwayọọ nwayọọ kpoo ma mee ka rọba pvc ahụ dị nro, ma jiri okirikiri pvc wụrụ awụ na elu elu nke eriri waya nchara, jiri nkedo a kapịrị ọnụ, ma mesịa mepụta ezigbo ihe mkpuchi plastik.
Igwe a na-eji ígwè waya kpụọ na PVC dị mma karịa na ihe owuwu ahụ na-adịwanye mma, nke nwere ike ịgbatị ndụ ọrụ nke eriri waya. Agba nke eriri waya plastik na-acha ọcha, nwa, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, wdg, enwere ike ido ya na agba plastik dị iche iche dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Ọ na ọtụtụ-eji skipping eriri, mma na akụrụngwa, akuku USB, uwe akara, traction eriri, wdg
Enwere ike ịhazi oke na agba nke PVC waya eriri igwe. Igwe nchara dị n'ime nwere ike ịbụ igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ eriri waya waya. The plastic ntekwasa akụkụ nwere ike ichebe esịtidem ígwè waya eriri si corrosion, na ogologo ọrụ ndụ na ndị ọzọ anụ Ọdịdị. Plastic-ntekwasa ígwè waya eriri nwere pụtara ìhè corrosion eguzogide, nke bụ 3,5-5 ugboro ndụ nke n'ozuzu galvanized ígwè waya eriri. Ihe a na-etinye paịlị siliki nke nwere plastik nwere ezigbo mgbochi na-eyi n'ihi na waya na waya, eriri na eriri dị na eriri ahụ kewara site na mkpuchi, na ndụ ọrụ bụ 1.5-2 ugboro nke eriri igwe nkịtị. Nguzogide ike ọgwụgwụ nke eriri waya plastik na-adịkarị okpukpu abụọ karịa nke waya waya nkịtị.
Aha ngwaahịa Cokwanyere ntekwasa ígwè waya eriri
Ihe onwunwe Mkpuchi ： PVCEriri waya waya: ígwè galvanized / igwe anaghị agba 316/304/201,
agba Uzo, green, odo, ọbara ọbara, nwa, acha anụnụ anụnụ, odo odo, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
Ngwa Craftgbọelu ụgbọelu; Automobile ipigide USB, Control Gịnị; Telecommunication, mgbatị Gịnị, spring Gịnị, kpara waya sieve, handicraft, eletriki n'ụlọ ngwa na akụrụngwa, elekere na ese, n'ibu akụrụngwa, ngwaike mmiri, wdg
Nke gara aga: Pu ntekwasa ígwè waya eriri
Osote: Igwe anaghị agba nchara Waya eriri
Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Electro kpaliri Steel Waya eriri, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri,